अफगानिस्तानमा हजार बढी नेपाली, फर्काउन सरकारलाई दवाव – Everest Times News
अफगानिस्तानमा हजार बढी नेपाली, फर्काउन सरकारलाई दवाव
२०७८ श्रावण ३१, आईतवार १७:२०
काठमाडौं । विद्रोही तालिवान अफगानिस्तानको राजधानी काबुलभित्र छिर्न थालेपछि त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको सुरक्षालाई लिएर चासो बढ्न थालेको छ ।
बिशेष गरेर अमेरिकी सेना, राष्ट्रसंघीय कार्यालयहरु तथा विभिन्न कुटनीतिक नियोगको सुरक्षाका लागि पूर्व नेपाली, भारतीय र बेलायती सेनाका गोर्खाहरु अफगानिस्तानमा रहेका छन् । तालिवानले राजधानी कब्जा गर्ने अवस्था हुन थालेपछि उनीहरुलाई सुरक्षित फर्काउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई दवाव बढेको छ ।
विभिन्न स्रोतहरुले अफगानिस्तानमा एक हजारदेखि १५ सयसम्म नेपालीहरु रहेको बताइएको छ ।
यसैबीच सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका नेताहरुले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरुलाई उद्धार गरी तत्काल स्वदेश फिर्ता गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
काँग्रेसका नेता रमेश लेखक र एमालेका नेता डा. राजन भट्टराईले अतिवादी समूह तालिवानले अफगानिस्तानमा तनावग्रस्त बनाइरहेका बेला नेपाली नागरिकहरुको उद्धार गरी तत्काल स्वदेश फिर्ता गराउन गम्भिर भइदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारुढ नेता लेखकले नेपाली नागरिकहरुलाई सुरक्षित ढंगले स्वदेश फिर्ता गराउने जिम्मेवारी सरकारको हुने बताए ।
‘अफगानिस्तानमा रहेका सबै विदेशी नागरिकहरु चिन्तामा परेका छन् र ठूलो संख्यामा त्यहाँ नेपालीहरु रहेका छन् । ती नागरिकहरुको सुरक्षित घर फिर्ती र त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षाको सुनिश्चितता गर्न सरकार गम्भिरतापूर्वक लाग्नु पर्दछ’ उनले भने ।
एमाले विदेश विभाग प्रमुख सकेत रहेका डा. भट्टराईले अफगानिस्तानबाट ढिला नगरी नेपाली नागरिकको स्वेदश फिर्ता गराउने काममा लाग्न सरकारसँग माग गरे । उनले द्वन्द्व र हिंसाको चपेटामा परेका आफना नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने काममा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।